Suzhou OCAN Polymer Material Co., Ltd no misy ao amin'ny distrikan'i Suzhou fampandrosoana amin'ny renivohitra 35 tapitrisa voasoratra anarana. OCAN dia manokana ao amin'ny famokarana PVC / PET (anisan'izany ny lambam-pandriana, horonana, film) nandritra ny 20 taona. Amin'izao fotoana izao, dia manana 14 OCAN nandroso famokarana andalana, fanatontosana ny fahafahana isam-bolana ny 3500 taonina. Ny vokatra dia be toy ny ampiharina amin'ny fanontam-pirinty, fonosana, amponga Wrap, avoaky, herinaratra sy rano appliance fikarakarana orinasa.
OCAN manohana foana ny fanahin 'ny "fanaovana ny marina", "takarina sy", "Fanavaozana" sy "Win-Win" satria ny fananganana. Tsy izahay ihany no manome vokatra avo lenta, fa ny mpanjifa ihany koa ny asa fanompoana amin'ny fo manontolo-. Tongasoa eto amin'ny hifandray sy hiara-miasa!
Suzhou Ocan Polymer Material Co., Ltd dia matihanina PVC sy mpanamboatra PET. 20 taona ny R & D, ny famokarana ny varotra sy ny orinasa experience.The Manao in extrusion & calerdering tsipika.
OCAN mahazo isan-karazany patanty taratasy,-teknolojia avo vokatra, China-marika anarana orinasa, ISO9001: 2008 rafitra taratasy sy ny fitiliana ny SGS tonga, ROHS sy ny tontolo iainana takiana fitsapana. Isan-taona Output 30000tons sarobidy.
PVC fangaraharana andian-dahatsoratra
PVC frosted taratasy andian-dahatsoratra
PVC fotsy andian-dahatsoratra
PVC mainty andian-dahatsoratra
PVC loko andian-dahatsoratra
PVC malefaka sarimihetsika andian-dahatsoratra
PVC foil andian-dahatsoratra
PVC Wrap amponga
ho etỳ ambonin'ny: Vita; malamalama na Matt / embossed
ny fitsipika size:
700 * 1000mm, 1000 * 1400mm, 915 * 1220mm, 915 * 1830mm, 1000 * 2000mm, 1220 * 2440mm na araka ny mpanjifa 'safidy.
Tonga soa eto amin'ny hifandray antsika! Tsy miandry fatratra fanorenana maharitra, azo ianteherana, tsara sy mendri-pitokisana ny fifandraisana eo aminareo ho fampandrosoana iombonana.
Quality Toro lalana: People-mifantoka, anjara, Tsara, zava-baovao sy mahafa-po
Quality Tanjona: Product mahafeno fepetra Rate> = 99%
Tamin'ny andro Delivery Rate> = 98%
Miverina amin'ny Rate <= 0,8%